प्रचण्ड भोलि चीन उड्दै, क-कसलार्इ भेट्दैछन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रचण्ड भोलि चीन उड्दै, क-कसलार्इ भेट्दैछन् ?
भदौ २९ गते, २०७५ - ११:३४
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागको निमन्त्रणामा प्रचण्ड शनिबार (भोली) चीन भ्रमण जान लागेका हुन् । प्रचण्ड भोली दिउँसो १२ः५ बजे चीन उड्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रचण्डका सचिवालयको एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार भोली शनिवार चीन गएर बुधबार (असोज ३) गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको चीन भ्रमण निजी भ्रमण भएको बुझिएको छ । प्रचण्डसंगै भ्रमणदलमा पत्नी सिता दाहाल, उनकी स्वकिय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल र एक जना सहयोगी सहभागी हुनेछन् ।
उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली युनचाओसंग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका उच्च अधिकारीसंग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
उपराष्ट्रपति ली चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङका सबैभन्दा विश्वासिला नेता मानिन्छन् । चिनियां राष्ट्रपति सी रसिया भ्रमणमा रहेकै बेला अध्यक्ष प्रचण्डको चीन भ्रमण हुन लागेको हो । सी स्वदेश फर्केलगत्तै भेटवार्ताको टुंगो लाग्ने स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड परिवारसहित चीनको नानजिङ र ऐनान जाने कार्यक्रम समेत तय भएको छ ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको पार्टी एकतापछि हुन लागेको प्रचण्डको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । उनले दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाको सरकारको सम्बन्ध सुदृढ गर्नको लागी दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा आफु जाने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
प्रचण्ड गत साता मात्र भारतको साताव्यापी भ्रमणबाट स्वदेश फर्केका थिए । भारत भ्रमणको क्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
भदौ २९ गते, २०७५ - ११:३४ मा प्रकाशित
कृषि मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय प्राङ्गारिक बिज्ञ सम्मेलन गर्दै, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र अध्यक्ष प्रचण्डले समापन गर्ने
यस वर्ष बृद्धभत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा
पेटको स्वास्थ्य जाँच गर्न राष्ट्रपति भण्डारी शिक्षण अस्पतालमा
नेकपाका जिल्ला नेतृत्वको सुची बाहिरिएलगतै माधव नेपाल किन बाहिरिए ?
सरकारसँग वार्ता गर्न राप्रपाको वार्ता समिति
रोटी सेक्ने चाहीँ यिनिहरु होइनन्, यि त मधेशीको नाममा स्वार्थ सिद्ध गर्ने हुन्
राप्रपालाई वार्तामा आउन पत्र
देशमा विकासका थुप्रै रेकड राख्ने काम भएको छ – अध्यक्ष प्रचण्ड
एकता प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक
श्रीलङ्काका होटल र चर्चमा बिस्फोटः १३७ को मृत्यु, ९ जना विदेशी नागरिक (अपडेट)